Waa kuma bulshada Roma? | Somaliska
Soomaalida Sweden waxay ka eedsheegtaan cunsuriyad ama waxaa lagu eedeeyaa in aysan la qabsan bulshada ay ku dhex noolyihiin, balse Soomaalida waxaa la dhihi karaa waa kuwo meel sare jooga marka loo barbar dhigo bulshada Roma oo mudo kharniyaal ah la daris ahayd cunsuriyad baaxsan. Hadaba maxay yihiin Roma? Maxay Soomaalidu ka baran karaan? dadka Romada ayaa la kulmay cunsuriyad iyo naceyb badan oo socday mudo boqolaal sano ah. Waxay ku kala firirsanyihiin guud ahaan Yurub. Xiligii kumeysiga ayaa xitaa wadanka Portugal uu musaafuriyay dadkii romada ee ku noolaa dalkiisa isagoo u dhigay Brazil. Dadka romada waxay caan ku yihiin tuugsiga iyadoo aad ku arkeyso tareemada iyo goobaha kale iyagoo tuugsanaya. Dadka Romada ayaa tiradooda lagu qiyaasaa 7 milyan balse waxaa la aaminsanyahay in tiro badan oo Roma ah aysan diiwaan galin in ay Roma yihiin si ay uga fogaadaan cunsuriyada sidaa darteed waxaa lagu qayaasaa ku dhawaad 14 milyan in ay guud ahaan yihiin. Inta badan waxay ku nool yihiin wadamada bariga Yurub balse sidoo kale tiro badan ayaa ku nool galbeedka Yurub iyo bariga dhexe. Romada ayaa la aaminsanyahay in ay ka soo jeedaan India oo qarnigii 11-aad ay u soo haajireen Yurub. Wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee aduunka ayaa dadka Romaha waxaa gaboodfalyo xun kula kacay nidaamkii Ruushka iyadoo la mamnuucay luuqadooda, dumarkooda waa la duray si loo yareeyo in ay wax dhalaan. Romada waa dad qiimeeya qoyska, sida Soomaalida waxay leeyihiin qoysas balaaran iyadoo gabdhaha da'a yar lagu guursado. Bikrada muhiim ayay u tahay romada. Sida Soomaalida marka ay is guursanayaan Romada ninka ayaa lacag ku bixiya xaaska. Dadka Romada ayaa la dhihi karaa nidaamka qoyskooda waxa uu ku dhow yahay midka Soomaalida, waloow caadooyin badan ay kala yimaadeen India. Romada ayaa waxay soomaalida kaga duwan yihiin in ay qaataan diinta meelaha ay u haajiraan, inta badan roomaha waa Kiristaan balse waxay sidoo kale leeyihiin Muslimiin qaasatan kuwa ku nool Bosnia, Masar iyo Turkiga. Sweden dadka romada ah waxaa lagu sifeeyaa dad minorati ah kaasoo xaq u siinaya in si gaar ah loola dhaqmo iyo in caruurtooda xaq u leeyihiin luuqadooda hooyo wax lagu baro balse Romada kama faaideystaan fursadaan iyadoo kala bar caruurta Romada aysan dugsi hoose ka bixin. waaxda iskuulada (Skolverket) ayaa sheegtay in aysan hayn cid ku hadli karta luuqada Romada. Soomaalida Sweden ku dhaqan ayaa qaarkood dhahaan waxaan ka liidanaa Romada taasoo meelaha qaar markii loo eego xaqiiqo ah, balse meelo badan ayaan kaga wanaagsanahay. Soomaalida dad cunsuriyad ku soo korey ma ahan sida Romada balse Romada waxay nooga fiicanyihiin way naga firfircoonyihiin Sweden. Waxay leeyihiin ururo ay ku mideysanyihiin oo xuquuqdooda u dooda. Hadaba ma la dhihi karaa Soomaalida waxay noqon karaan ama yihiin Romada labaad ee Yurub? Sidee ayaan uga hortagi karnaa in aysan nagu dhicin waxa ku dhacay Bulshada Roma? taas waa mid u taala dadka wax garadka ah ee Soomaaliyeed.
Waa kuma bulshada Roma?
Soomaalida Sweden waxay ka eedsheegtaan cunsuriyad ama waxaa lagu eedeeyaa in aysan la qabsan bulshada ay ku dhex noolyihiin, balse Soomaalida waxaa la dhihi karaa waa kuwo meel sare jooga marka loo barbar dhigo bulshada Roma oo mudo kharniyaal ah la daris ahayd cunsuriyad baaxsan. Hadaba maxay yihiin Roma? Maxay Soomaalidu ka baran karaan?
dadka Romada ayaa la kulmay cunsuriyad iyo naceyb badan oo socday mudo boqolaal sano ah. Waxay ku kala firirsanyihiin guud ahaan Yurub. Xiligii kumeysiga ayaa xitaa wadanka Portugal uu musaafuriyay dadkii romada ee ku noolaa dalkiisa isagoo u dhigay Brazil. Dadka romada waxay caan ku yihiin tuugsiga iyadoo aad ku arkeyso tareemada iyo goobaha kale iyagoo tuugsanaya.
Dadka Romada ayaa tiradooda lagu qiyaasaa 7 milyan balse waxaa la aaminsanyahay in tiro badan oo Roma ah aysan diiwaan galin in ay Roma yihiin si ay uga fogaadaan cunsuriyada sidaa darteed waxaa lagu qayaasaa ku dhawaad 14 milyan in ay guud ahaan yihiin. Inta badan waxay ku nool yihiin wadamada bariga Yurub balse sidoo kale tiro badan ayaa ku nool galbeedka Yurub iyo bariga dhexe.
Romada ayaa la aaminsanyahay in ay ka soo jeedaan India oo qarnigii 11-aad ay u soo haajireen Yurub. Wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee aduunka ayaa dadka Romaha waxaa gaboodfalyo xun kula kacay nidaamkii Ruushka iyadoo la mamnuucay luuqadooda, dumarkooda waa la duray si loo yareeyo in ay wax dhalaan.
Romada waa dad qiimeeya qoyska, sida Soomaalida waxay leeyihiin qoysas balaaran iyadoo gabdhaha da’a yar lagu guursado. Bikrada muhiim ayay u tahay romada. Sida Soomaalida marka ay is guursanayaan Romada ninka ayaa lacag ku bixiya xaaska. Dadka Romada ayaa la dhihi karaa nidaamka qoyskooda waxa uu ku dhow yahay midka Soomaalida, waloow caadooyin badan ay kala yimaadeen India.
Romada ayaa waxay soomaalida kaga duwan yihiin in ay qaataan diinta meelaha ay u haajiraan, inta badan roomaha waa Kiristaan balse waxay sidoo kale leeyihiin Muslimiin qaasatan kuwa ku nool Bosnia, Masar iyo Turkiga.
Sweden dadka romada ah waxaa lagu sifeeyaa dad minorati ah kaasoo xaq u siinaya in si gaar ah loola dhaqmo iyo in caruurtooda xaq u leeyihiin luuqadooda hooyo wax lagu baro balse Romada kama faaideystaan fursadaan iyadoo kala bar caruurta Romada aysan dugsi hoose ka bixin. waaxda iskuulada (Skolverket) ayaa sheegtay in aysan hayn cid ku hadli karta luuqada Romada.
Soomaalida Sweden ku dhaqan ayaa qaarkood dhahaan waxaan ka liidanaa Romada taasoo meelaha qaar markii loo eego xaqiiqo ah, balse meelo badan ayaan kaga wanaagsanahay. Soomaalida dad cunsuriyad ku soo korey ma ahan sida Romada balse Romada waxay nooga fiicanyihiin way naga firfircoonyihiin Sweden. Waxay leeyihiin ururo ay ku mideysanyihiin oo xuquuqdooda u dooda.
Hadaba ma la dhihi karaa Soomaalida waxay noqon karaan ama yihiin Romada labaad ee Yurub? Sidee ayaan uga hortagi karnaa in aysan nagu dhicin waxa ku dhacay Bulshada Roma? taas waa mid u taala dadka wax garadka ah ee Soomaaliyeed.
As Wr Wb , salaan diirran kedib , walaalka maqaalkaan soo qoray , qofkii suura geliyayba mahadsanidiin gaar ahaan walaalka Jimcaale.
Haddii aan ra’yigayga ka hadlo , welibana aan maago ama damco in aan dhibaatooyinkeena tilmaamo . Wallaahi qiiro ayaa i qabato aad ayaana u niyad jabaa , maxaa yeelay , dadkeena sida u ay MOOGAYAAL intooda badan u yihiin ayaa aad ii dhibta!!
Maxaa yeelay waa dad , waxaa nahay dad aan bulshada la qabsan ( aan ixtiraamin ) la qabsiga kama wado Diinteena suuban aan dayacno , balse waxaan ula jeedaa xagga xoogsiga , aqoonta , akhyaarnimada , ixtiraamka !
Mararka qaar ayaan is dhahaa , amaa sidii Sahyiiniyiintii ( Yahuudii ) Ruushka Adolf Hitler ugu kacay amoow mid idinkugu kacaa , oo food dheerna idinka reebin !
Wallee qofka bulshada dhex gala , Joornaalka haddii aad aqrido ceebaheenaa daadsan , Tusaalooyinka xun xun ayaa naloo soo qaataa ! Iwm.
Haddii aan maago ka sheekeey ,,, qisooyinka ,,, ama dhacdooyinka maalinlaha ah ee anshaxdarada ah ee bulshada kula kacno , ma soo koobi karo .
Madoonaayo in aan idin niyad jebiyo , balse ceebteena haddii aanan ka sheekeeysan iskuna sheegin oo yaa noo sheegi ?
Balse hala dadaalo , Romanigaan , Diin , iyo Midab midna laguma takoorin ee si kale ayaa lagu qoonsaday anagana , oo Midab , Diin , iyo boqolaal cillad ah nagula takooraa ka warama ?
April 9, 2011 at 07:10
Asc. wallaalaha Somaliyeed.
Walaal waxaan aad ugu faraxsanahay in arintaan laga hadlo, meel hadii aad jogta waa laga muuqdaa ama laga maqnadaa, waa maah maah soomaliyeed.
waxaan ahay gabar soomaliyeed ee dagan tuulo yar oo aay ku yartahay soomalida. waxaan jogaa wadanka 2 sano kuna dhameeyay SFI ga kurs D 8 bilood. waxaan helay shaqo markiiba, aad ayaan isugu fiicanahay dadka aan la shaqeeyo iyo dadka tuulada daganba. waxeey i weeydiiyaan hadii aan soomaliya toos oga imid iyo in kale, waayo waxeey aaminsanyihiin in soomalida eeysan dadka dhex galin.
Dadka aan isla daganahay tuulada ee Soomalida ah cidna lama hadlaan aan ka aheeyn macalimiinta SFI ga, ane waxeey i dhahaan maxaad u shegtaa GALADA. Walaal cidna DIINTAADA kaama sareyso ee aan ka muuqana wadanka aan joogna.
Markii lagaaro xiliga salaada waan ka baxaa shaqada waana soo tukadaa, badankood waxeey i weydiiyaan waxa aan sameynayo waana u shegaa in aan tukanayo.
Anagoon DIINTEENA ka tagin ayaan ka dhex muuqan karnaa bulshada, waayo waa la’ogyahay in aan muslim nahay, waana in aanan ka yeelin in xaqeena lagu tunto sida Romada.
Ugu dambeeyntii waxaan leeyahay Soomaliyeey aan isku xirnaano.
April 9, 2011 at 13:57
asc dhamaantina waxaan le yahay sabrin waa wanaagsan tahay figradada qofka firfircon meel ayuu iska soo bixiya anaga hadan somali nahay qofka waya araga ama cilmi leh wuxuu yesha mucariid badan inti lagu farxi lahay ama wax laga bare lahay ayaa laga soo horjedsada ama niyada laga dila waxaan dhihi lahay meelkaasta waxaa lagu mara cilmi iyo wayo aragnima dadka qarkod waxaan arkaay hada hadleysid ey ku arkaan qof wax taqano ja waba laga si jedsaday 2011 dowladaha hore mar ayeey garana anagana waxana mareyna 1900 ayaba jogna ile qofki hore marka rabay hadan ka soo horjedsano wax bana noma hagagayo igana rali noqda figradeyda hadey qaldan tahay ile waa wax an arkayo maaliinkasto